Qeybta Tijaabada Bulshada, Qeybta Daaweynta Farsamada | Martech Zone
Axad, Janaayo 13, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan wuxuu ahaa caqabad dhab ah xagga shaqada. Waan hubaa inaan ka shaqeeyey wax ka badan 100 saacadood - mana aanan u soo dhowaan inaan guntin geliyo liistada waxyaabaha la doonayo in la dhammaystiro.
Daryeelka caafimaadka dartiis, waxaan badanaa isku dayaa inaan ka baxo waxyaabo ay tahay inaan sameeyo oo aan sameeyo wax gebi ahaanba ka duwan. Waa qayb ka mid ah shakhsiyadayda - saaxiibkay Pat wuxuu iigu yeeraa tayda xaasaska. 🙂
Toddobaad ama ka hor waxaan la kulmay saaxiibkey si aan ugala hadlo dhismaha degel cusub laakiin isticmaal Twitter ayaa API si dhab ah loo sameeyo buufin. Marwadayda cusub ayaa ah Haddii Nuug.
Waxaan ubaahanahay inaan barto API-ga Twitter-ka, marka hore, in kastoo. Toddobaadkan dhammaadkiisa sidaas ayaan sameeyay. Haddii Nuug waa codsi yar oo raadis ah oo raadinaya wax kasta oo nuugaya adoo isticmaalaya Google. Qaybta qabow, in kastoo, ay tahay inay dhab ahaantii sii wado tirakoobka ku saabsan waxa dadku dhahaan nuugista!
Soo-booqdayaasha, inta badan, waxay u dhaqmayaan si wanaagsan. Waxaan bilaabay liis shaandheyn ah oo loogu talagalay ereyada iyo jumladaha, iyo sidoo kale liistada liistada cinwaanada IP-ka ee aan joojin doonin edeb darrada. Sidoo kale waan ku faraxsanahay kaftanka ay martidu leeyihiin - waan ku saxsanahay iPhone iyo iPod Touch. (Waxaa laga wanaajiyay inay u dhaxeyso Ann Coulter iyo Hillary Clinton horaantii usbuuca.) Dabcan, asalka waad nuugtaa marba marka ka dambaysa wuu soo baxaa.
Ku dhajinta Haddii nuugo xisaabta Twitter wuu yara adkaaday. Laakiin tan ugu adkayd waxay ahayd samaynta qaab loo jiido Twitters-ka ay dadka kale dib ugu qoraan mareegtada 'If nuug'. Si aan u sameeyo, waxaan hayaa shaqo Cron ah oo hubisa API API ilbiriqsi kasta iyo diiwaanka ayaa xaqiijinaya mid kasta oo ka mid ah Tweets dib ugu noqo goobta, adoo duubaya wixii cusub.
Haddii aad rabto inaad Twitter ku sameyso wax aad u maleyneyso inuu nuugayo, kaliya ku tuur fariin @ifsuck. Haddii aad rabto inaad daawato waxa nuugaya maalintii oo dhan iyo waqtiga oo dhan (Ron Paul waa # 1), ka dib booqo Haddii Nuug.
Jan 14, 2008 saacadu markay ahayd 9:35 PM
Ujeeddada oo dhan ayaa ah in la soo ururiyo waxa dadku geliyaan raadinta webka oo loogu yeero wadar ahaan iyo dhuuqitaan dhowaa? Haddii qoraalkaagu u malaynayo inuu raadinayo "xarig" nuug, taasi ma samaynayso. Hadday khiyaano uun tahay in dadku adeegsadaan (oo si fiican, way iga shaqaysay) si aan u arko inta jeer ee weedho qaarkood galaan, markaa way shaqaysaa.
Waxaan u maleynayaa inaan xoogaa "shaqeynayo la taaban karo" laakiin waxaan si naxariis leh u filayaa in haddii aan dhigo "lollipops" in mashiinku raadin doono isku-darka "lollipops" iyo "nuuga".
Waadna ogtahay, haddii aad qorto nuugista badanaa badanaa, waxay ku bilaabataa inay u muuqato mid qosol leh…
Jan 14, 2008 saacadu markay ahayd 9:58 PM
Barta dhabta ah, Bob, waxay ahayd uun in la dhiso wax ku dhex jira Twitter-ka API. Hore uma aanan sameyn oo waxaan u baahday inaan jimicsado maskaxdayda (wax yar).
Baashaalku waa kaliya in la daawado waxa dadku u maleeyaan inuu nuugayo - laga bilaabo muuqaalkii ugu dambeeyay ilaa muuqaal muddo dheer ah. Waxay horeyba u heshay waxoogaa yar oo soo socda Twitter, halkaas oo dadku ay u adeegsanayaan inay ka sheegaan shaqada, nolosha, tikniyoolajiyadda, iwm.
Daawashadiisu waa waxa aniga xiisaha ii leh. Sida daadadka qoraalada laxiriira NFL inta lagu gudajiro ciyaaraha kubada cagta. Dadku runti way ka soo baxayeen arjiga!
Wax badan oo ku soo kordha arjiga noocan ah. Tani runti waxay ahayd uun tijaabo, barnaamijka dhabta ah waxyar ayuu wadada ka yara yaraanayaa!
Jan 15, 2008 saacadu markay ahayd 3:08 PM
Twitter Waa Inuu Dhintaa